Galaxy Note9နဲ့ S9 Duo စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် Android Pie Update ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ ရရှိမယ်
8 Nov 2018 . 4:58 PM
မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ့ Developer Conference မှာ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ လက်ရှိ နောက်ဆုံး Flagship စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Galaxy Note9နဲ့ S9 Duo စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် Android OS Update ရရှိမယ့်အကြောင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းလောက်မှာ Open Beta အနေနဲ့ စတင်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အစောဆုံးအနေနဲ့ US ၊ South Korea နဲ့ Germany နိုင်ငံတွေမှာရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ ဥရောပနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေအတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ရဲ့ပထမဦးဆုံးလပတ်မှာတော့ Stable Update ရရှိနိုင်ပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ Samsung Experience UI အစား မနေ့ကအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Samsung ရဲ့ One UI နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy Note9နဲ့ S9 Duo စမတျဖုနျးတှအေတှကျ Android Pie Update ကို ၂၀၁၉ ခုနှဈဇနျနဝါရီလမှာ ရရှိမယျ
မနကေ့ကငျြးပခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ့ Developer Conference မှာ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Foldable စမတျဖုနျးကိုမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ လကျရှိ နောကျဆုံး Flagship စမတျဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Galaxy Note9နဲ့ S9 Duo စမတျဖုနျးတှအေတှကျ Android OS Update ရရှိမယျ့အကွောငျးတှကေိုထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
အခုလာမယျ့ ဒီဇငျဘာလ အစောပိုငျးလောကျမှာ Open Beta အနနေဲ့ စတငျထုတျပေးသှားမှာဖွဈပွီး အစောဆုံးအနနေဲ့ US ၊ South Korea နဲ့ Germany နိုငျငံတှမှောရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီ့နောကျမှာတော့ ဥရောပနဲ့ အာရှနိုငျငံတှအေတှကျရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၉ ရဲ့ပထမဦးဆုံးလပတျမှာတော့ Stable Update ရရှိနိုငျပွီး ပုံမှနျအသုံးပွုနကွေ Samsung Experience UI အစား မနကေ့အသဈမိတျဆကျလိုကျတဲ့ Samsung ရဲ့ One UI နဲ့အသုံးပွုရမှာဖွဈပါတယျ။
ပါးလွှာတဲ့ဘေးဘောင်နဲ့ Meizu 16s ရဲ့ဓါတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာ
by PhoneHayKo .5hours ago
Facebook ရဲ့ Message တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပြီး Reply ပြန်လို့ရပြီ
Google Stadia ကဘာလို့ Mobile Gaming တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တာလဲ?
Game Console တွေနဲ့ Gaming PC တွေကို ကျဆုံးစေနိုင်တဲ့ Google Stadia
by Zawyè . 11 hours ago
Android အတွက် Opera Browser မှာ Unlimited VPN အသုံးပြုလို့ရပြီ
by PhoneHayKo . 12 hours ago
Wireless Charging နဲ့ Battery ပိုကောင်းလာတဲ့ New AirPods ကို Apple ကြေညာပြီ